Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » IBritish Izindiza: Azisekho izintokazi namanenekazi
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
Ushintsho kumgomo weBritish Izindiza lwenziwe ukugwema ukubandlulula abagibeli abangaweli ngaphansi kwanoma iyiphi yale mikhakha emibili, njengezingane, kanye "nokuhlonipha imigomo emisha yezenhlalo."
IBritish Izindiza iyala abashayeli bayo bezindiza ukuthi bangabe besabiza abagibeli bezindiza ngokuthi 'zintokazi nabahlonishwa'.
Ushintsho kumgomo weBritish Izindiza seluthathwe njengendikimba 'yokufakwa nokwehluka'.
Akukacaci okwamanje ukuthi abagibeli beBritish Airways bazobingelelwa kanjani esikhundleni 'sezintokazi nabahlonishwa' bendabuko.
IBritish Izindiza isiphenduke inkampani yezindiza yakamuva yokuba yisisulu sokuvuswa kwezepolitiki futhi yathathela indawo ukubingelela kwayo kwendabuko kwekhulu leminyaka ubudala ngenye indlela 'yokungathathi hlangothi ngokobulili'.
The UK ophethe ifulegi useyalele abashayeli bezindiza ukuthi bangabe besabiza abagibeli ngokuthi "makhosazana namanenekazi", bagcine imikhonzo ingathathi hlangothi ngokobulili.
Ushintsho lwenqubomgomo luthathwe njengendikimba "ekufakwa nokwehlukahlukana."
Ushintsho kumgomo lwenziwe ukugwema ukubandlulula abagibeli abangaweli ngaphansi kwanoma yimuphi wale mikhakha, njengezingane, kanye "nokuhlonipha imigomo emisha yezenhlalo."
The British Airways Isikhulumi sivele ukuqinisekisile ukuthuthela ku "wake speak," siphawula ukuzibophezela kwenkampani "ekufakeni nokwehluka."
"Sizimisele ukuqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende ethu azizwa amukelekile lapho ehamba nathi," kusho okhulumela inkampani yezindiza.
Isimemezelo asizange sehle kahle UK Abaphawuli abalondolozayo. Abanye baze bamemezela isinqumo senkampani ethwala ukuthi ilahle le nkulumo, kudala yabonwa njengekheli elijwayelekile nelihloniphekile, “ukuhlaselwa” komlingiswa waseBrithani.
Ngenkathi abagibeli begibela i- British Airways Ukundiza ngeke kusazwakala “zintokazi namanenekazi,” akucaci ukuthi abahambi bomoya bazobhekiswa kanjani ukuya phambili, kepha inkampani yezindiza ngokwesiko "ikhuthaze abashayeli bayo ukuba balethe ubuntu babo ezimemezelweni ezisemkhunjini."
Januwari 15, 2022 ngo-00: 08
Alan Phipps uthi:
Okthoba 13, 2021 ku-09: 59
Ngiyasiqonda isifiso sokubandakanya kepha kuthiwani ngesiko nemikhuba emihle yaseBrithani yakudala? Ngakho-ke manje singase sizwe ukuthi "Siyakwamukela ku-Traveling People okubandakanya kuyo amaLadies and Gentlemen, izingane kanye nabahambi be-LGBT abanezinye izingxenye ezahlukahlukene zomphakathi wethu !! ”
Umthwalo ongaka !! Isikhathi eside nangaphezulu kokubingelela okuphezulu nguKaputeni. Ngabe la mabutho e-WOKE afinyelela kanjani esimeni lapho eyalela khona izinguquko ezinjalo? Kwenzekeni eBritish yethu?